एनटीसीको नयाँ वर्षे अफर : २०० को प्याक किन्दा ३ जीबी डाटा सित्तैमा ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com एनटीसीको नयाँ वर्षे अफर : २०० को प्याक किन्दा ३ जीबी डाटा सित्तैमा ! - खबर प्रवाह
सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम (एनटीसी)ले नयाँ वर्ष २०७६ को अवसर पारेर आफ्ना ग्राहकका लागि नयाँ अफर ल्याएको छ ।
नयाँ वर्षको अफरअन्तर्गत एनटीसीले २०० रुपैयाँ बराबरको प्याक खरिद गर्ने ग्राहकलाई ३ जीबी डाटा उपहार स्वरुप प्रदान गर्ने भएको छ ।
यस्तै, २०० रुपैयाँको प्याक खरिद गर्दा २०० मिनेटसम्म टकटाइम (भ्वाइस प्याक) तथा २०० वटा एसएमए पठाउन मिल्ने सुविधा पनि एनटीसीले उपहार स्वरुप प्रदान गर्ने भएको छ ।
एनटीसीको नयाँ वर्षे अफर चैत ३० गते (शनिबार)देखि लागू भएर वैशाख २ गतेसम्म चल्ने छ ।
बालबालिकाको आँखामा गाजल- बन्न सक्छ खतरा
सिंगापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जीत, नेपाल २ सय १७ रनले विजयी